22 Feb, 2019 - 00:02	 2019-02-21T07:59:41+00:00 2019-02-22T00:00:39+00:00 0 Views
Ateya mariva murutsva haatye kusviba magaro.
Kana munhu achinge atanga chimwe chinhu, haazeze zvimwe zvinogona kukonzerwa nechinhu ichocho. Rutsva rwunosvibisa, saka vanhu vaiteya mariva vaiteya vakagara kana kuchonjomara murutsva zvekuti vaizopedzisira vasviba.
Zvekuita: Rutsva chii?
Huswa hwakatsva zvekusara angova matsito nedota.
Gukura anotiza18 Oct, 2019
Tsumo nemadimikira namukanya18 Oct, 2019
‘Mwanasikana rega kuzvitarisira pasi18 Oct, 2019